तपाईको वरिपरी धेरै मानिसहरु को शाब्दिक सूक्ष्म (अञ्चल निकाय) हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
यो कल्पना गर्न लगभग असम्भव छ, तर के तपाईं कहिल्यै वरिपरि केही मानिसहरू वास्तवमा एक 'आत्मा' छ भने कहिल्यै आश्चर्य गर्नुहुन्छ? तपाईं केवल आफ्नो दैनिक जीवन मा हेर्न को लागि छ र तपाईं कहिलेकाहीँ हामी सहानुभूति संग अभिनय गर्न सक्षम छन् जो मान्छे पाउन, तर वास्तवमा अरू मा पूर्ण रूपमा बेपत्ता रूपमा हिड्न वा प्रत्येक छ कि उनको अनुहारमा व्यापार गर्न सक्छ जो कमजोर 'मानवता'।
जर्ज इवानोविच गुर्डजियफ एक विवादास्पद ग्रीक-अर्मेनियाई दार्शनिक, रहस्यमय, लेखक, संगीतकार, कोरियोग्राफर र व्यापारी थिए। यदि तपाईंसँग यसको तत्काल एकनिपथ छ किनभने तपाईं विरोधी-ग्रीक वा विरोधी-अर्मेनियाई हुनुहुन्छ, त्यो पूर्व-प्रोग्राम गरिएको सांस्कृतिक इनपुटलाई अलग र पढ्न दिनुहोस्। यो बयान मानिसबाट:हामी सडकमा भेट्ने व्यक्तिहरूको एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत मानिसहरू रिक्त छन् जुन, जुन वास्तवमा पहिले नै मरेको छ। हाम्रो लागि भाग्यशाली छ कि हामी यसलाई देख्न सक्दैनौ र थाहा छैन। यदि हामी जान्दथे कि कति मानिसहरू वास्तवमा मरेका थिए र यी कति जना मरेकाहरू हाम्रो जीवनमा शासन गरिरहेका छन्, हामी पागलसँग डराउनै पर्छ।"
के हुन सक्छ कि हामीले यो सोचेको भन्दा बढी सोच्नु पर्छ? हामी पहिले देखि नै फिलिमहरु र सीरीज जान सक्छ जसमा हामी निकट भविष्य मा रोबोट लग रहे हो कि अब तपाईं अंतर नहीं देख सकते। रोबोट जुन पनि पहिचान गर्न र मानव भावनामा प्रतिक्रिया गर्न सक्षम छन्। Netflix श्रृंखला 'वास्तविक मानव' को एक राम्रो उदाहरण थियो। छापको लागि, तल YouTube भिडियो हेर्नुहोस् (र तल पढ्नुहोस्)।
रोबोट र अवतार
अब यो श्रृंखला मुख्य प्रकार रोबोटको एक उदाहरण हो जुन हामी समाजमा छोटो अवधिमा आशा गर्न सक्दछौं। लामो दौडमा, हामीले यसको बारेमा सोच्नु पर्छ कि फिल्म पारदर्शिता दिखाया कि पुरा जीवविज्ञान नैनो को माध्यम ले दोहोर्याइन्छ। इजरायलका वैज्ञानिकहरूले यस वर्षको एक अङ्ग्रेजी प्रिन्टरको निर्माण गरेको छ जुन स्टेसन सेल जानकारीको आधारमा स्टेम सेल जानकारीमा आधारित हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, एक हृदय (तल भिडियो हेर्नुहोस्)। तथापि, विज्ञान पनि क्षण पुग्न चाहिएको छ जब शरीरमा बायोसेलहरू नैनो-टेक डिजाइन गरिएका कक्षहरू द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ जुन कुनै त्रुटिमा सुधार गर्न सक्दछ। के तपाईंलाई बिग्रेको असंभव विचार छ? त्यसोभए के हो भने के हुन्छ भने के हो भने घाँटी छ र मानव शरीरसँग पहिले नै यो आत्म-उपचार सम्पत्ती छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
नेदरल्यान्ड्समा आय दान कानूनले पहिले नै सुनिश्चित गरेको छ कि अंगहरू वास्तवमा (कानूनी) राज्यको सम्पत्ति बन्नेछन्। इजरायल प्रिन्टर टेक्नोलोजीले बताए कि त्यो व्यवस्था वास्तवमा असाध्यै थियो; किनकी एक देशमा नीदरल्याण्ड जस्तै 'हेल्थ काउन्सिल' भनिन्छ एक सल्लाहकार निकायमा तपाईं मान्न सक्नुहुन्छ कि मानिसहरू वास्तवमै जान्दथे कि यो प्रविधि आउँदैछ र यो नजिकको भविष्यमा अङ्ग्रेजीहरू प्रिन्ट गर्नको लागि धेरै सुरक्षित हुनेछ। यी मुद्रित अंगहरूलाई शरीरबाट अस्वीकार गरिने छैन, यस शरीरको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई रोक्नको लागि कुनै औषधि नपाइने छ। सबै पछि, तिनीहरू मुद्रित अंगहरू आफ्नै डीएनएमा आधारित हुन्छन्।
कुनै पनि मामला मा, यो ध्यान दिनुहोस कि शरीर को एक विदेशी अंग को पतन गर्न को लागी दिलचस्प छ। यो हेर्न को लागी पनि दिलचस्प छ कि मानिसहरू कसरी, उदाहरणका लागि, दान गरिएको हृदय प्राप्त गर्दछ कहिलेकाहीं डोनरका विशेषताहरू लिन्छन्, तर तर अलग।
आय दान कानूनले यो सुनिश्चित गरेको छ कि राज्यले तपाईंको अंगको स्वामित्व गर्दछ र सबै सम्पत्ति जो राज्य सम्पत्ति हो, राज्यले कानूनी (गैरकानूनी) अपरिपक्व रखरखाव गर्न सक्दछ। त्यो उनीहरूको भवनको साथ, यसको पूर्वाधारको साथ र भविष्यमा सम्भवतः यी नयाँ सम्पत्तिहरूसँग: तपाईंको अंगहरू। यो 5G सञ्जाल मार्फत अनलाइन र CRISPR-CAS12 भनिन्छ क्लाउड-सम्पादन विधि (तल TED प्रस्तुति हेर्नुहोस् र तल पढ्नुहोस्)।
यदि तपाईंले उपरोक्त माथि उपस्थित गर्नुभएको छ भने, तपाईंले भेट्टाउन सक्नुहुनेछ कि मानव शरीर (र सबै जीवविज्ञान) निकट भविष्यमा एक rewritable जैव प्रणाली हो, जसको हरेक भाग प्रतिस्थापनयोग्य र अनुकूलन हुनेछ।
यो परिचय आवश्यक थियो तपाईंलाई राम्रो बुझ्न को लागी कि कसरी प्रमुख टेक कम्पनीहरु को प्रबन्धहरु लाई लाग्छ र उनि के गर्दै छन्। उदाहरणका लागि, Google को प्राविधिक प्रमुख, आविष्कारक र दार्शनिक रे कुर्जीविल भन्छन् कि 2045 मा हामी अनौठो र सिमुलेटिव संसारहरूमा बाँच्न सक्नेछौं कि धेरै आक्रामक हो कि हामी यो थाहा छैन कि यो एक सिमुलेशन हो। उहाँ पनि बताउनुहुन्छ कि हामी नैनो-टेक अवतार र डिजिटल अवतारहरू पाउन सक्छौं र आफैं अवतारहरूमा अपलोड गर्न सक्दछौं।
"चेतना" वा "आत्मा" के हो?
त्यसोभए ठूलो प्रश्न हो: को हो वा कुन वेट्याटहरूमा आफैलाई अपलोड गर्दछ? रे कुर्जविल जस्ता ट्राफेनमैनमेन्टहरूका अनुसार, चेतना भनेको दिमागमा न्यूरोन्सको संख्याको परिणाम हो। यदि तपाईं पर्याप्त नैनो-टेक रिसेप्टरहरू (न्यूरॉन्स) सँग रोबोट निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ जुन मानव मस्तिष्कको संख्यामा धेरै व्यक्तिहरू छन्, चेतना हुनेछ। किनकि प्रविधि अझै सम्म मानव मस्तिष्क को दोहोर्याउन को लागी तयार छैन, Google जस्तै कम्पनीहरू पहिले नै क्लाउड समाधानमा काम गर्दै छन्। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि इन्टरनेट धेरैजसो कम्प्युटरहरू एक-अर्कालाई जोड्नका लागि एक राम्रो उपकरण हो जसले तिनीहरू भर्चुअल दिमाग बनाउन सक्छ। ब्लकचेन प्रविधि यो उपयोगी उपकरण हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, यदि तपाइँसँग नेटवर्कमा क्वांटम कम्प्यूटरहरू छन् भने, यो राम्ररी राम्रो हुनेछ। प्रमुख प्रविधी कम्पनीहरू तंत्रिका सञ्जाल निर्माण गर्दै व्यस्त छन् र आफैमा नाउँ भनेको कुन लक्ष्य हो भन्ने प्रमाण हो।
तैपनि म एक कदम फिर्ता लिन चाहन्छु र 'जागरूकता' को विषयमा रहन चाहन्छु। कतिपय अन्य स्तनपालनहरूको विपरीतमा मानिसहरू ब्यस्त छन् किनभने तिनीहरूसँग नव-कोर्टेक्स (र यसैले बढी न्यूरोन्सहरू छन्) रे रेजेजिलले भनेका छन्? या चेतना केहि कुरा हो जुन एकदम फरक फरक छ?
तर्कको लागि, हामी मानिन्छ कि तपाईं 2045 वरपर डिजिटल संसारमा आफ्नो "जागरूकता" अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ; एक सिमुलेशन जुन भर्चुअल वास्तविकताको लागि गुगलको क्लाउड प्लेटफर्ममा चल्छ, उदाहरणका लागि। र केवल सुविधा को कल्पना गर्नुहोस कि एलोन मास्क कम्पनी नीरिलिंकले हाम्रो मस्तिष्क लाई अनलाइन लटकाने मा सक्षम हुनेछ। त्यसपछि तपाईं हाम्रो 'वर्तमान मूल शरीर' को मस्तिष्कमा सबै प्रकारका चीजहरू प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै स्पर्श, गन्ध, सुन्नु, दृष्टि र भावना (स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण आदि)। यदि Google ले नयाँ सिमुलेशन सिमुलेशन बनाउँदछ भने, हामी जेक सुलीले 2009 चलचित्रको नीलो अवतार संसारमा गरेको जस्तो कि पृथ्वीमा चारै ओर हिँड्न सक्दछ।
चलचित्रको अभियोगको ट्रेलर शायद मेरो तर्कको साथ कहाँ जान चाहन्छ भनेर व्याख्या गर्न एक सजिलो उदाहरण हो। एक नजर लिनुहोस् र हेर्नुहोस् कसरी सधैं 'मूल' व्यक्ति र 'अवतार' बीचको लाइन हो। यद्यपि, कि फिल्म सर्च्रेट्स 'lifelike रोबोट' वा 'avatars' मा आधारित छ किनकि हामी पनि श्रृंखलामा हेर्न जस्तै Netflix मा 'वास्तविक मानव'। यद्यपि, यदि हामी आजीवन अनुकार मान्दछौं जुन क्लाउड प्लेटफर्ममा पूर्णतया हिंड्छ, जहाँ पनि अवतार डिजिटल हुन्छ, त्यसपछि सिमुलेसन 'ट्युबल विश्व बाहिर' हो। त्यसपछि तपाईं सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईंको बिस्तारमा मस्तिष्क-क्लाउड इन्टरफेस र तपाईंको पार्टनरसँग बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै झल्किन्छ जुन तपाईले यो पछाडि सबै यथार्थवादी सिमुलेशनमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। सायद तपाईंको शरीर चम्किरहेको छ किनकी तपाईंको मस्तिष्क हाल सिमुलेसनमा निलो पुरुष संग एक भयानक युद्धमा छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)।
यदि, Google's Ray Kurzweil र धेरै अन्य ट्राफिकम्युनिस्ट वैज्ञानिकहरू अनुसार, यो नजिकको भविष्यमा त्यस्ता वास्तविक जीवन सिमुलेशनहरूमा बाँच्न सम्भव हुन सक्छ, के हामी आफैलाई यस्तो प्रश्न गर्न सक्दैनौं भने हामी पहिले नै त्यस्तो सिमुलेशनमा रहन सक्दैनौं? के सबै जो कि एक प्रकारको केबिनमा छ र एक अवतार संसारमा खेल्ने छैन? यदि हामी एक क्षणको लागि यो तर्कमा रह्यौं भने हामी फेरि "चेतना" को अवधारणामा फर्क्यौं। भविष्य कल्पना गर्नुहोस् Elron Musk बाट Neuralink दिमाग जडान वायरलेस छ र 5G नेटवर्क मार्फत चलाउँछ। तपाईंसँग तपाइँको दिमाग मार्फत Google क्लाउड प्लेटफार्ममा अनुकरणमा तपाईंको अवतार संग एक ताररहित जडान छ। त्यसोभए त्यस अनुकरणमा अवतार नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति तपाईंको वास्तविक मस्तिष्क हो जुन यो संसारमा तपाईंको ठोस शरीरमा छ; तपाईं आईने बेलामा हेर्नु भएको हो। त्यसपछि अनुकारमा अवतार तपाईंको मूल मस्तिष्कमा नियन्त्रण गरिन्छ। अवतार 'प्रेरित' हो र प्रेरणा व्यक्तिको रूपमा 'चेतना' को रूपमा अनुकरण भित्र लिन सकिन्छ। त्यो प्रेरणा तपाईंको मूल मस्तिष्कसँग वायरलेस लाइन हो।
यदि तपाईं माथिको माथिको पछ्याउन सक्षम हुनुभयो भने, म तपाईलाई निम्न विचार व्यायाममा ध्यान केन्द्रित गर्न सोध्नेछु। अब तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि एक सिमुलेशनमा बाँच्ने जस्तो के हो र त्यस सिमुलेशनमा कसरी अवतार छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्दछ र हामी 5G सञ्जाल मार्फत सिमुलेशनको साथ वायरलेस मस्तिष्क जडानको सम्बन्ध राख्न सक्दछौं। त्यस सिमुलेशनमा अवतारको प्रेरणा।
त्यसपछि हामी प्रश्नमा आउँछौं कि तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको वर्तमान शरीर मस्तिष्क संग नै पहिले नै अनुकरणमा अवतार हुन सक्छ। यदि हामी फिजिकिस्ट नील्स बोहर द्वारा डबल स्लिट्स प्रयोगमा हेर्छौं, यो दर्शक देख्दा मात्र फरक छ। धेरै लेखहरूमा मैले व्याख्या गरेका छु कि हामी पहिले नै "सिमुलेशनमा बस्न सक्छौं"। तपाईं राम्रो सुरुवात गर्नुहुन्छ भने यो लेख राम्रो तरिकाले पढ्नुहोस्, 'सिमुलेशन' मेनु वस्तुको अधीनमा हेर्नुहोस् वा खोज फिल्डमा शब्द 'अनुकरण' प्रविष्ट गर्नुहोस्। म त्यस परिचयलाई यहाँ पछ्याउन छोड्छु र त्यसोभएको धारणाको कारणलाई सीमित गर्दछ जुन हामी पहिले नै "सिमुलेशनमा बस्न सक्छौं"। म जानबूझकर यो उद्धरण चिह्नहरूमा राख्दछु, किनभने तपाईं सिमुलेशनमा बाँच्न सक्नुहुन्न, तर केवल यसमा पूर्ण विश्वास पाउन सक्दछ, तर वास्तवमा बुझ्न र बाहिर (बाहिरबाट) प्ले गर्नुहोस्।
यदि हामी सिमुलेशन खेल्दैछौं भने, त्यहाँ मूल वर्णको साथ एक 'आत्मा जडान' हुनुपर्छ, जस्तै त्यहाँ एउटा क्लाउड प्लेटफार्म सिमुलेशनसँग सम्बन्धित 5G वायरलेस Neuralink हुनु पर्छ यदि तपाईं सिमुलेशनमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ जुन 2045 मा lifelike जस्तो देखिन्छ । त्यो 'आत्मा जडान' यसैले हो 'मूल व्यक्ति' को साथ सञ्जाल जडान कुर्सी मा बसेको व्यक्ति। यो मस्तिष्कमा प्लग हुनु हुँदैन, जस्तै 'द म्याट्रिक्स' चलचित्रमा, तर ताररहित जडान हुन सक्छ। अनुकारमा अवतार यसैले 'एनिमेटेड' र बाह्य रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ। यस सिमुलेशनमा अवतार पनि बाह्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सायद अब 'आत्मा' वा 'चेतना' को अवधारणा को एक राम्रो विचार छ।
In यो लेख मैले वर्णन गरेको छु कि हामी शायद भाइरसको प्रणाली सिमुलेशन देखिरहेको छौँ। यसमा मैले वर्णन गरेको छु कि यो सिमुलेशन हाम्रो मूल (हाम्रो 'मूल फारम') परीक्षण गर्न हो। वर्तमान सिमुलेशनको बिल्डर लुसिफरको रूपमा पहिचान गर्न लगाउँदछ। त्यो यो "सिम संसार" को अवलोकन मा आधारित एक अवलोकन हुन सक्छ, तर सब कुराले संकेत गर्दछ कि सिमुलेशन निश्चित दिशा मा निर्देशित हुनु पर्छ। यदि सिमुलेशनको बिल्डरको रूपमा तपाईँले 'नि: शुल्क इच्छाको व्यवस्था' को सम्मान गर्नु पर्छ, खेलको नतिजा निश्चित गर्न केवल 1 तरिका हो।
नि: शुल्क इच्छा बिना, कुनै कार्यक्रम अनुकार छैन, तर यो वास्तवमा एक प्रकारको फिल्म हो, जुन परिणाम पहिले देखि नै निश्चित छ। तथापि, सिमुलेसनको सार यो हो कि तपाइँले खेलाडीलाई चुनौती दिन्छन् र खेल खेल्न कसरी राम्रो तरिकाले परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले विमान बनाउन उडान र ओटोप्लिटमा उडान गर्नको लागि उडान सिम्युलेटर निर्माण गर्नुहुन्न, तपाईंले यसलाई पायलट परीक्षण गर्न निर्माण गर्नुभयो। बहु-खेलाडी सिमुलेसनमा तपाइँ कसरी अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ कसरी खेलाडीहरूले व्यक्तिगत रूपमा व्यवहार गर्दछ र सामूहिक रूपमा व्यवहार गर्दछ र कुन छनौट गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा बनाउनेछन्।
सिमुलेशनको नतिजाको ग्यारेन्टी गर्ने एकमात्र तरिका, नि: शुल्क इच्छाको व्यवस्था बिना नै, खेलको बिल्डर द्वारा नियन्त्रित खेलमा सम्भव नहुँदा धेरै एनपीसीहरू (गैर प्लेलिस्ट क्यारेक्टरहरू) राख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यी एनपीसीहरू नक्कलमा प्रमुख पदहरूमा राख्नुहोस् र स्क्रिप्टलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ; एक लिपि जसले अन्य खेलाडीहरूलाई फरक दिशा लिनको लागि लगभग असंभव बनाउँछ। लिपिको बारेमा हामी यो सिमुलेशनमा पहिचान गर्न सक्दछौं भन्ने बारे थप जान सकिन्छ यो लेख.
मानौं त्यहाँ हाम्रो वर्तमान सिमुलेशनको 1 बिल्डर हो वा केवल सुविधाको खातिर जुन "मूल तह" मा बिल्डर्सहरूको टोली हो, त्यसपछि तपाइँ सिमुलेशन भित्र मात्र सीमित एनपीसी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ; एनपीसीहरू अनुकारमा लिपिको पालना गर्नुहोस् र एक निश्चित दिशा (अन्य बिल्डर्स टीमद्वारा संचालित) मा अन्य खेलाडीहरूलाई समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर, त्यहाँ स्क्रिप्ट र परिणाम प्रभाव पार्ने अर्को तरिका त्यहाँ छ, तर त्यसो भए हामी सबैलाई हेर्ने हो कि सबै खेलाडीहरू हो र यसैले सोध्नुहोस् जहाँ सबै खेलाडीहरूसँग मूल खेलाडिहरू आउँछन्; अन्य शब्दहरुमा: यो सिमुलेशन खेल्ने कति खेलाडीहरू छन्?
सबै आत्माहरू कहाँबाट आउछन्?
यस पृथ्वीमा मानिसहरूको संख्या 8 बिल पुग्छ। यदि हामी सिमुलेशन मोडेलबाट सुरु गर्छौं भने, यस खेल खेल्नको लागि 'मूल तह' मा 8 बिलियन खेलाडीहरू पनि आवश्यक छन्। वास्तवमा, साँच्चै महत्त्वपूर्ण पाठकले मलाई सोधेको थियो कि प्रश्न: ती सबै आत्माहरू कहाँबाट आउछन्? अब हामी जान्दछौं कि "आत्मा" वा "चेतना" को अवधारणा वास्तवमा मूल तहको जडानको लागि खडा हुन्छ; हाम्रो अनुकरण को बाहिर हाम्रो मूल रूप। यो खडा छ, जस्तै यो, हाम्रो मूल आत्म (जस्तै माथि वर्णन गरिएको) संग ताररहित जडानको लागि। त्यसैले त्यहाँ मूल तहमा लगभग 8 बिलियन खेलाडीहरू हुनुपर्दछ।
मलाई संदेह छ कि कुनै 8 अरब आत्माहरू छैनन् र त्यहाँ कुनै आत्मा विभाजित उपकरण छैन, जस्तै कि वेस पेनर जस्तै मान्छे (हेर्नुहोस् यहाँ)। मेरो विचारमा, तिनीहरू अवास्तविक काल्पनिक कथाहरू हुन्। यो टेक्नोलोजीको वर्तमान अवस्था हेर्न धेरै यथार्थवादी छ। यसमा हामी देख्छौं कि रोबोटहरू बढ्दै स्वायत्त हुँदैछन् र यो उद्देश्य यो कृत्रिम बुद्धिले मानव बुद्धि र भावनाको अनुकरण गर्न सक्छ। यसैले यदि यो सिमुलेशनको बिल्डर (वा बिल्डर्स टीम) आत्म-प्रतिकृति अवतारहरू (हाम्रो मानव शरीर) निर्माण गर्न सक्षम भएको छ, त्यसकारण यो मानिन्छ कि हाम्रो वरपर हेर्ने धेरै शरीर / अवतारहरू आत्म-नक्कल गर्दै छन्, तर कुनैपनि बाह्य नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरु जस्तै, यो थिए, कृत्रिम बुद्धिमान मानव अवतार जो 'जेक सुली' बाहिरी छैन र यसैले एनिमेटेड छैन। सुविधाको खातिर, चलो यो सुलभ एनपीसी कल। सुल्लिस एनपीसी नम्र छैन र धेरै चासो र भावुक हुन सक्छ। यो कारणले हामी उन्नत एअर (जैव-मस्तिष्कमा) सँग काम गरिरहेका छौं। यस सिमुलेशनका निर्माताहरूले "धेरै राम्रो" उन्नत बटहरू प्रयोग गरेका छन्।
तपाईंसँग एनपीसीहरू जुन यस सिमुलेशनका निर्माणकर्ताहरूको समूह र नियन्त्रित एनपीसीहरूको नियन्त्रणमा राखिएको छ जुन 'कृत्रिम बुद्धिमानी' मस्तिष्क छ र लिपिको पालना गर्न अग्रग्रेड गरिएको छ। एनपीसीहरूको पहिलो समूह बिल्डर (/ बिल्डर्स टोली) सँग "आर्कन्टन्टिक वायरलेस जडान" द्वारा नियन्त्रण गरिएको छ र स्क्रिप्ट नियन्त्रण गर्दछ। दोस्रो समूहले कुनै पनि संघर्ष बिना स्क्रिप्ट पछ्याउँछ।
सोलिस (ज़ोम्बी) एनपीसीहरूको प्रकार्य के हो?
पहिलो हामी प्रभाव देख्छौं। यदि तपाईं सिमुलेशन चलाउनुहुन्छ र तपाई स्क्रिप्ट पछ्याउने एनएमसीहरूको घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने तपाईले 'साथी दबाब' को अवधारणाको सामना गर्नु पर्छ। यो सिमुलेशन पनि यति आजीवन छ कि तपाईंले यसको पहिचान गर्न शुरु गर्नुभयो।
'soulless' को धारणा
संयोगमा, यस सन्दर्भमा 'सोलोस' को अवधारणा यस्तो छ कि यस व्यक्ति को बटन मा 'जेक सुली' को बाहेक कुनै अन्य चीज छैन।
के तपाईसँग कहिल्यै संग कुराकानी छ कि वास्तवमा कुनै जानकारी छैन भने "आत्मा" वा "चेतना" भनेको के हो भने उनीहरूले धर्म वा आध्यात्मिक प्रवृत्तिबाट शब्द उठाएको छ? मेरो जन्म को क्षण देखि म "व्यक्तिगत बाहिर लाइन" को व्यक्तिगत रूप देखि जान्दछु। म आफैंलाई हेर्छु जब मैले मिरिनमा हेर्छु। यसैले म जेक सुली को बारे मा जान्दछु जो मेरो अवतार यस सिमुलेशन मा ड्राइव गर्दछ। यो सधैं यो तरिका हो। मान्छे जो एनपीसी (तर धेरै बुद्धिमानी र सहानुभूति हुन सक्छन्) को एनिमेटेड छैन (यस सिमुलेशन को बाहिर मूल परत मा जेक सुली छैन) र यसैले यो बिल्कुल कल्पना गर्न सक्दैन। 'आत्मा' वा 'चेतना' बारे कुरा गर्दै अधिकांशले एक प्रकारको 'एक प्रवृत्तिमा भाग लिने' वा रोबोट सोफिया-जस्तै कुरा हुनेछ; 'माथि उठाउने शब्दहरू' मा आधारित।
यसकारण सुलभ एनपीसीहरूको प्रकार्यले लिपि पछ्याउन एनिमेटेड अवतारहरू (वा यसको: यस अवतारको माध्यमबाट यस बहु-खेलाडीमा रहेको बहुभाषी खेलाडीहरू) लाई उत्प्रेरित गर्छ। तिनीहरूले ती प्रेरणात्मक अवतारहरूलाई महसुस गर्दछन् कि तिनीहरू अल्पसंख्यक छन् र प्रतिरोध कुनै प्रयोगको हो। जब तपाइँ सहभागिता गर्नुहुन्छ जब तपाई भाग लिनुहुन्छ वा कति गलत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्दछ। यही कारणले हामीले देखेका छौं संसारका जनसंख्या हालैका दशकहरूमा छिट्टै बढ्दै जान्छ। यो यस सिमुलेशनको बिल्डरको अन्तिम चाल हो।
एक टिपिङ ठाउँ जहाँ पुग्यो भने एनपीसीहरूको संख्या निकै ठूलो भएको छ, प्रेरित खेलाडीहरूलाई थप र अधिक महसुस गर्छ कि तिनीहरू छोटो छोटो छ। हामी पनि बिर्सने छौं कि यो केवल एक खेल हो; जुन हामी अनुकरण गर्दछौं।
यसैले यो हामी को हो र बाहिर बाहिर व्यवस्थापन गर्न को लागी पुन: रद्द गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यी अनुकरणमा ती सबै एनपीसीहरू हामीलाई विश्वास गर्छन् कि हामी हराइरहेका छौं र हामी अल्पसंख्यक छौं। त्यो सिमुलेशनको भ्रम हो। अनुकारमा अरबौं जस्तो देखिन्छ; त्यसभन्दा बाहिर यो शायद एक मुट्ठी छ जुन सिमुलेशन चलाउन प्रयास गर्दछ। हाम्रो शरीर अवतार दिमाग यस सिमुलेशन को लागि धेरै व्यस्त छ। त्यो केवल हाम्रो अवतार दिमाग र यसको भावना हो। हामी यस सिमुलेशन भित्र बाबेलियन भाषणको व्याकुलबाट चिन्तित छौं र फेरि चुप लाग्नु र हामी के हो सुन्नुपर्छ। तपाईंको जेक सुली सम्झनुहोस्।
स्रोत लिङ्क सूची: patreon.com
ट्याग: अवतार, जागरूकता, वर्ण, विशेष, खेल, मानव, जेक, बहु, गैर, NPC, खेलाडी, खेल्दै, वास्तविक, अनुकरण, सुली, आत्मा
8 जुलाई 2019 मा 14: 56
यदि तपाइँ अब सोच्नुहुन्छ "ओहो छाडेर म एनपीसी हुँ!"
सुरु गर्नका लागी, तपाइँ सम्भवतः यो वेबसाइटमा थिएन, तर यो पनि सम्भव छ कि तपाईंको अवतार दिमाग प्रोग्रामको वर्ष तपाईले बिर्सनु भएको छ कि तपाई को हुनुहुन्छ।
8 जुलाई 2019 मा 18: 31
अझै सावधानीपूर्वक उल्लेख गर्दै कि यस सिमुलेशनका धेरै बिल्डर्सहरू समावेश छन् ... र किन यो गर्दै छन्?
8 जुलाई 2019 मा 18: 53
मैले केही सावधानीपूर्वक रिपोर्ट गरिनँ।
म मात्र संभावनाहरु लाई रूपरेखा गर्छु र बिल्डर टीमलाई फोन गर्दछु; को रूपमा रे रेज्जविल पछि अनुकारको बिल्डर हुन सक्छ र प्रोग्रामरहरू को पूर्व-कार्यक्रम सिमुलेशन कोडमा एक दललाई तैनात हुन सक्छ।
विशेष गरी लिङ्कहरू अन्तर्गत लेखहरू पढ्नुहोस्।
8 जुलाई 2019 मा 19: 08
मैले पहिले नै एक सानो छोरोको रूपमा सिमुलेशनलाई बुझ्न सकें, तर निरन्तर कार्यक्रम र चीजको दोहोरो अनुपालनको भाइरस संग संक्रमित हुन्छ!
एक बच्चाको रूपमा मलाई लाग्यो कि म वास्तवमा यहाँबाट बाहिर जान्छु र सोच्न चाहन्छु कि यो के थियो महसुस गर्न मर्छ। म मृत्यु चाहँदैनन् किनभने जिन्दगी चाहँदैन तर जिज्ञासाको कारण!
पछि जीवनमा तपाईंका आमाबाबुले सोध्छन्! "तपाईं आफ्नो जीवनमा के गर्न चाहानुहुन्छ?" मैले भने, "म केहि हुन जाँदैछु र म अध्ययन गर्न जाँदैछु किनभने ती चीजहरू जो मलाई चासो छैन," मैले भन्यो। त्यसपछि मेरा आमाबाबुले यसो भने: तर तपाईलाई राम्रो बन्नु पर्दैन!
मैले भन्यो भने म म चाहन्छु र म घुमाउछु।
र पछि मैले मेरो भावनालाई अझ राम्रो सुन्न सक्थे किनकि अब म साँच्चै बुलटिटको वेबमा पकडिएको छु!
यस लेखको लागि धन्यवाद! मैले फेरि वास्तविक जडानको साथ जडान महसुस गरेको छु!
8 जुलाई 2019 मा 21: 22
अनि तपाईं कस्तो विचारलाई विचार गर्नुहुन्छ कि अञ्चल प्रेरणा प्रेरित व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालको समयमा प्रेरित गर्न सक्छ? त्यसैले प्रेरित गर्नुहोस्।
8 जुलाई 2019 मा 22: 00
त्यसपछि तपाई गलत छ। फेरि राम्ररी पढ्नुहोस्।
जब तपाईं प्लेस्टेशन खेल खेल्नु हुन्छ भने अर्को अवतारमा लिन सक्नुहुन्छ?
9 जुलाई 2019 मा 18: 16
होइन, लिनु हुँदैन।
तर यदि अन्य अवतार मस्तिष्क छ भने तपाईं यसबाट चलाउन सक्नुहुनेछ।
वा कि त्यो सम्भव छैन किनकि उसले जान्छ कि त्यो म्यासेज एजेन्डा लागू गर्दछ?
9 जुलाई 2019 मा 18: 55
प्रत्येक अवतार मा मस्तिष्क छ र तपाईं कारण संग धेरै गर्न सक्नुहुन्छ तर आत्माले उत्पन्न हुने कुनै पनि कारण उत्पन्न गर्न सक्दैन।
एक प्लेस्टेशन खेलमा एनपीसीहरू कहिल्यै अचानक कुनै बटनहरू प्राप्त गर्दैनन्।
9 जुलाई 2019 मा 03: 07
सोच्नुहोस् कि तपाईंको आत्मा अनलाईन संस्थाहरूमा बेच्न सम्भव छ। तपाईंले आफैंलाई एक ग्यारेन्टी (अति कम आवृत्ति) लाई कम गर्दछ र तपाईंको आत्मा जडान गुमाउनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्राणलाई दुर्व्यवहारको माध्यमबाट अरुको खर्चमा उठाउनको निम्ति बेच्न बेच्नुहुन्छ, हत्या र आफ्नो शक्ति को संरक्षण गर्न झूटो फैल।
टाढा तपाईं घरबाट हुनुहुन्छ, सजिलो यो फर्कनु हो।
यो मतलब छैन कि म आफैलाई पवित्र हुँ, तर म मेरो कार्यका लागि जिम्मेवार छु। न त म अँध्यारो मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठानमा संलग्न छु। यदि तपाईं आफ्नो मूलको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यो जडान राख्न चाहानुहुन्छ र कम स्तरमा अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्न। किनकि हामी अहिले यो महसुस गर्छौं कि हामीले पहिले यो गरेका छौं र प्रायः यो ग्रहमा घर बाट टाढा छौँ।
यो लेखमा के तपाईंले लेख्नुभएको छ यो सबै कुरा के हो, यो तपाईंको बारेमा र यसको जवाफ हाम्रो बारे हो।
9 जुलाई 2019 मा 12: 55
राम्रो लेख, भारी कुरा हो। सम्भवतः सामान्य आबादीको लागी, तिनीहरूको सफ्टवेयर यसको लागि बनाइएको छैन।
प्रश्न यो म्यारायण, भ्रम, र उहाँले योबाट के प्राप्त गरे जस्तै बनेको छ। सायद महान बिल्डर लूसिफर हो, 'लाइट ल्याइडर' र कर्मचारीको रूपमा उहाँका लिपिहरू जसले इनाम दिन्छन्? ??
लुसिफरले यस संरचनालाई कसरी जित्छ? के उसले आफूलाई खर्च, आफुको लागि एक ठूलो थिएटरमा मजा लिन्छ? के हो लुसिफर शायद भगवान ???
9 जुलाई 2019 मा 14: 55
स्टेम सेलको लिङ्क गरिएको लिङ्क यहाँ पढ्नुहोस्:
लुसिफर भाइरस प्रणाली (सिमुलेशन) को बिल्डर हो जुन हामी खेल्छौं। त्यस लेखमा म व्याख्या गर्दछ कि यो मनन क्वांटम फील्ड को संक्रमित छ ("स्टेम सेल")।
यसैले हरेक धर्मको ईश्वरीय लुप्तफर पनि गोपनीय छ र अब क्याथोलिक चर्चले खुल्ला रूपमा (यदि तपाइँ YouTube मा खोज्नुहुन्छ) को उपासना गरिएको छ:
9 जुलाई 2019 मा 15: 19
(थोरै) मा मेरो आँखा यो ऊर्जा मैट्रिक्स को संचालन र ((रीसाइक्लिंग) पनि यो नियन्त्रण म्याट्रिक्स को बनाए राखन को लागि हो। बाइबलमा विभिन्न निर्देशनहरू हेर्नुहोस्, च्याफ र मकै / बकरी र बकरीहरू आदि।
तपाईं कटौती गर्ने के बोल्नुहुन्छ, ईथर बाट क्वांटम यांत्रिक प्रतिक्रिया।
9 जुलाई 2019 मा 15: 25
यो ध्यान दिनुपर्दछ कि धर्म र दोहोरोसमय (भगवान / शैतान मोडेल र दुबै धर्मशास्त्रको अन्य रूपहरू जस्तै ईसाई धर्म बनाइएको इस्लाम, बायाँ बनाइएको दाँया, यिन र याङ, आदि) ले लुसिफरियन लिपिको भाग हो जुन polarity उत्पन्न गर्दछ जुन डीसी दिशा निर्देशन गर्दछ। अन्तिम लक्ष्य।
अंतिम लक्ष्य खेल आत्माहरु (त्यसैले अन्ततः मूल तपाईका लागि - सेल गुणहरू / रचनात्मक गुणहरू स्टिम गरेको छ) को लागि भाइरस प्रणालीको सेवा गर्न को लागी र स्टेम सेल / क्वांटम फिल्डमाथि लाग्ने।
यसैले यो धर्म र धर्मनिष्ठाको लागि त्रासदीको मार्गलाई अस्वीकार गर्न / अस्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ (जुन एक धर्म र धर्मबाट 'अनन्त जीवन' को वादाको रूपमा हो) र तपाईंलाई सम्झना छ कि एक (भाइरस) नक्कल चलाउँछ।
9 जुलाई 2019 मा 15: 34
idd hard work को प्रदर्शन को दरवाजे मा लक मा गरदैछ।
9 जुलाई 2019 मा 17: 56
14 जुलाई 2019 मा 16: 41
14 जुलाई 2019 मा 18: 25
« वास्तवमा ब्रिटिश शाही परिवारको रूपमा रगतको उरुसुला वान ड्रे लेईन (भविष्यको ईयू अध्यक्ष) हो?
ड्यूश बैंकले मंगलबार पहिलो पटक मंदीको सुरुवाती पहिलो हस्ताक्षर गरे? »
कुल भ्रमण: 10.831.751